> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Computer si ay Nexus 7
Waxay qaateen badan oo sawiro leh camera iyo haatan doonayaa si ay u gudbiyaan si aad Nexus 7? Iyada oo screen todoba-inch, Google Nexus 7, taasina waa kiniin wax fiican in aad ku eegaan sawiro ku yaal. Haddii aad u badbaadiseen sawiro aad kombuutarka, si deg deg ah aad sawiro in Nexus 7. ​​wareejin karaan Si hawsha ay u dhammaystiraan si deg deg ah, halkan, waxaan doonayaa in aad la wadaagto tababare Android - Wondershare MobileGo for Android . Ka sokow gelinaya sawiro ku yaal, barnaamijkan kuu ogolaanaysaa inaad dib u wareejiyo si aad PC, oo iyaga tirtirto in Dufcaddii.
Sida loo sawiro ka computer wareejiyo Nexus 7
Talaabada 1: Calan aad Google Nexus 7
Download iyo rakibi Tababaraha this Android on your computer. Waxa maamula. Isticmaal cable USB ah ama isticmaal Wi-Fi in ay ku xidhmaan aad Google Nexus 7 aad computer. Ka dib markii aan ogaanno aad Google Nexus 7, tababaraha this Android waxay ku tusi doonaa in uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileGo for Android si buuxda u la jaan qaada badan oo telefoonka Android iyo murriyado, oo ay ku jiraan Samsung, Sony Ericsson, iyo HTC. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, waxaad riixi kartaa "More" .
Tallaabada 2. Transfer sawiro ka PC in Nexus 7
Riix saddexagalka yar ka hor "Sawirro" khaanadda tagay. Dhammaan galalka aad Nexus 7 ku qoran yihiin. Dooro gal ah si loo badbaadiyo sawirrada ama kaliya xaq guji aad mouse gudahood photos category si ay u abuuraan folder cusub.
Markaas, guji "Add". Tani waxay kor u soo Bixiyaa suuqa kala file browser. Raadi si aad sawiro doonayay oo iyaga soo dhoofsadaan. Haddii aad rabto in aad ku darto gal ah, guji saddexagalka "Add" iyo dooran "Add folder" hoos. Markaas maraan si folder sawirka aad kombuutarka oo soo dhoofsadaan. Ama, waxaad kale oo jiidi karaan jeedi ee photos iyo folder sawirka si aad Google Nexus 7. Inta lagu wareejiyo, waa in aad hubisaa in aad Nexus 7 lagu hayaa isku xidha aad PC sameeyo.
Taasi waa! Waa arrin sahlan tahay in la sawiro in Google Nexus 7 wareejiyo tababaraha this Android.
Sawiro ka sokow, tababaraha this Android sidoo kale awood inaad ka computer wareejiyo music aad Google Nexus 7 . Haddii aad tahay lover video ah, waxa kale oo aad nuqul ka kartaa jecel aad video files si aad Nexus 7. ​​Haddii qaab video waa in aynan, sida AVI , barnaamijka waxay kaa caawin kartaa in aad loogu badalo AVI in mid ka mid socon kara .